ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ အတန်းဖော်များ၊ ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်ပါကမက်ဆေ့ခ်ျအောက်တွင်ပုန်းနေပါ။
ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ အတန်းဖော်များ၊ ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်ပါကမက်ဆေ့ခ်ျအောက်တွင်ပုန်းနေပါ။ စာတိုမှစာအဆက်အသွယ်အားလုံးကိုစာတိုမှာ OK ကြည့်လို့ရပါသလား။
မေးလ် ru ရှိလူများအဘို့အရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ? ငါ၏အကမ္ဘာကြီးကို Safar များအတွက် menu ကိုပထမဦးစွာသင်သည်ငါ၏ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးရန်ရှိသည်ဟု, ပြီးတော့ရှာရန်လည်салманов@mail.ru။ ငါ Artem Maltsev နှင့်အတူသဘောတူသည်။ သူ့ကိုထောက်ပံ့ ...
PIN ကို codes တွေကိုဒီ site ဖွင့်ငါ့ကို imvu အကြွေးကုဒ်ပေးပြီးငါကတကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့မယုံနိုငျကြီးမြတ်သတင်း varfeys! http://imvucreditsgenerator.com အတွက်လာချင်အကြွေးပေါ်ဝယ် ...
Avatar တွင်အလုပ်များကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာပြီးစီးနိုင်မည်နည်းရွှေအတွက်လွယ်ကူသောနှင့်ခက်ခဲသောအရာများကိုပြုလုပ်ပါ။ (ရှိလျှင်) ရွှေအတွက် Adeline ATP! Avatar တွင်ဤသို့သောလုပ်ဆောင်မှုမျိုးမရှိ၊
အဘယ်အရာကိုအသုံးပြုရန်ဖို့ဘယ်လိုоблако@mail.ruနှင့်ကအခမဲ့ဖြစ်သနည်း မိုဃ်းတိမ်ကိုသင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုဘယ်ဟာအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု (မည်သူမဆို Mail.Ru မိုဃ်းတိမ်၌နေရာလွတ် 100 GB ကိုရရှိသွားတဲ့။ ) ဖြစ်ပါသည် ...
အဘယ်အရာကိုနှစျတှငျ sots.set အဆက်အသွယ်ရောက်သလော 2006 နှစ်တွင် !!! 2006 တစ်နှစ်ဟုတ်ပါတယ်။ ထိုအခါ VC ကိုယခုမည်မျှရှိသနည်း ဤတွင် http://timemit.net/index.php?name=timersamp;op=viewamp;id=391 လူမှုကွန်ယက်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအတိအကျအချိန်ထွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ...
သင့် browser Amigo ကနေကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားဘယ်လိုနေသလဲ? ယင်း setting တွင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုကြပြီလော ယင်း၏အလွဲသုံးစားမှုများစွာသောအဘယ်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပေမယ့်ကောင်းပြီ, ငါသို့ရာတွင်တကယ့်နိုင်, ESET အွန်လိုင်း Scanner သုံးစွဲဖို့သငျသညျအကြံပေး ...
ပိတ်ဆို့စာမျက်နှာနှင့်အတန်းဖော်။ ဘယ်လိုသော့ဖွင့်နည်း ငါ့အဖြေကိုသွားပါ။ ပိုပြီးရှိပါတယ်။ ထိုအလင့်များနှင့်အတူ။ အဆိုပါစာမျက်နှာက Moderator အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလျှင်ပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြဖို့တောငျးဆိုခကျြနှငျ့အတူသူ့ကိုမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတဲ့စာတစ်စောင်ကိုရေးသားသင့်ပါတယ် ...
၁၈၃၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်တွင် A.S. Pushkin ကွယ်လွန်သွားသည်။ Pushkin သည်သူ၏ဇနီး၏ဂုဏ်အသရေအတွက် interceiving ပြင်သစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂျေ။ Dantes နှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ၁၈၃၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်၊
fotostrane အပေါ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စာမကျြနှာကိုဖျက်ပစ်ရန်သင်မည်သို့ဆက်တင်နှင့်အဘယျသို့ကွယ်လွန်သွားကြသူမိတ်ဆွေများကိုအတူလုပ်ဖို့ delete နိုင်ပြီး, စာမကျြနှာတိုင်းပြည်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်အတူ profile များကို delete poluchaetsya မဟုတ်ရှိပါတယ် ...
မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိသေးသည်သော vostanavit esle ဖုန်းနံပါတ်အဖြစ် prompt ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ် mail.ru ထောက်ခံမှု vzlamali ကိုအီးမေးလ်!? ငါသည်ငါ့ကမ္ဘာကြီးကီဝီပိုက်ဆံအိတ်တစ်ဦးကဝေမမကတစ်ဦးမသန်စွမ်းအကောင့် ...
authentication ကားအဘယ်သို့နည်း Authentication သည် http: //ru.wikipedia.org/wiki/РРСРРРРСРС: РССРСРСРРРСРС။ စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း L9; သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်တင်ပြလက်လှမ်းမီ၏ဘာသာရပ်မှဝင်ရောက်ခွင့် tion (eng ။ authentication ကို) စိစစ်အတည်ပြု; စစ်မှန်၏အတည်ပြုချက်။ ၁ စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မရောနှောသင့်ပါ။ authenthenticator - ...
အပြင်လူတွေကစာမျက်နှာကိုမကြည့်နိုင်အောင်အတန်းဖော်တွေထဲမှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကျွန်ုပ်တွင်“ ပိတ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ” ၀ န်ဆောင်မှုမရှိပါ။ အခြားအသုံးပြုသူများကိုသင်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုမလိုချင်ပါက ...
အကယ်၍ "အတန်းဖော်များ" တွင်မမြင်ရသောစာမျက်နှာသို့သွားပါက၊ 'မမြင်ရသောအရာသည်ဝင်လာသည်ကိုလူတစ် ဦး မြင်နိုင်သလော။
အကယ်၍ "အတန်းဖော်များ" တွင်မမြင်ရသောစာမျက်နှာသို့သွားပါက၊ 'မမြင်ရသောအရာသည်ဝင်လာသည်ကိုလူတစ် ဦး မြင်နိုင်သလော။ ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိနေသောသူငယ်ချင်းများ၊ စာမျက်နှာ၏ဘေးတွင်မဟုတ်ဘဲအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်လူတိုင်းလိုအပ်သည်။
Avatar အတွက်ငွေကြေးနှင့်ရွှေတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ဘယ်လို? avatar ကလူငါအခမဲ့ဘို့ရွှေအဘို့အထိတ်လန့် ..poyavilas အစီအစဉ်တွင်ပေါ့! ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသည်! ထိုသို့မခက်ခဲပါ! အရမ်းကောင်းသောယေဘုယျအားဖြင့်ဆု ...
Cloud@mail.ru မှပစ္စည်းများမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။ Cloud တွင်ဓာတ်ပုံပါသောဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုမတော်တဆဖျက်မိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း ???? လိုချင်သောဖိုင်ကို ရွေးချယ်၍ "save to cloud" ခလုပ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်လိုချင်သောဖိုင်ကို Cloud သို့ကူးယူပါ။
အခြေအနေပြအတန်းဖော်ထားရန်ကဘယ်လိုအဆင့်အတန်းအတန်းဖော်ထားဖို့ဘယ်လို? အခြေအနေဆိုက်၏စာမကျြနှာမှာမိမိဓါတ်ပုံကိုအပေါ်သေးငယ်တဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပါပဲ။ status အ, သင့်ဇာတ်ကောင်ကိုဖော်ပြမယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်ကွန်ရက်မှာအသုံးပြုကြသည် ...
အဆိုပါ VC ကိုသစ်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို? 1) ကြှနျုပျတို့ထောက်ခံမှုအတွက်ရေးရန်: vk.com/help2) ကိုစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်အောက်ခြေမှာhttp://new.vk.com/blogнажмите button ကိုပြန်ဆန်းသစ်ဖို့ခေါင်းစဉ် Access ကိုထည့်ပါ။ သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ပြဿနာနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ...
ru ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန် "cloud" မှတစ်ဆင့်ဖိုင်များကိုလူတစ်ယောက်အားမည်သို့လွှဲပြောင်းမည်နည်း။
ru ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန် "cloud" မှတစ်ဆင့်ဖိုင်များကိုလူတစ်ယောက်အားမည်သို့လွှဲပြောင်းမည်နည်း။ ပထမ ဦး စွာဖိုင်များအများဆိုင်ဖြစ်ရမည် သင်လိုချင်သောဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲကိုအမှတ်အသားပြုပြီးစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်“ အများပြည်သူမျှဝေခြင်း ...
ဘယ်အရပ်ကသင့်ကွန်ပျူတာသို့ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ဘယ်လို? mail.ru နှင့်အတူ? http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/v-29.flvиကိုပြောင်းလဲထိုကဲ့သို့သောhttp://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/29.htmlкое-чтоမှအပ်လုဒ်ကိုသည်အတိုင်း, ဗီဒီယို link ကိုယူ Internet မှ .Menyaetsya ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကဆက်ပြောသည် v- ဒေါင်းလုပ်ကဗီဒီယို? ဒါဟာလွယ်ကူ! ဤဗွီဒီယိုများအားလုံးသည်, သငျသညျဆိုပါက ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,312 စက္ကန့်ကျော် Generate ။